iSpell, Chirungu cheki kubva kuTerminal | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | General, Free Software
Kunyora zvakanaka kunodhura zvakanyanya. Kana zvishoma, zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei. Kana zvisiri nyore kunyora nemazvo mumutauro wedu, nezvose zvinofanirwa kutarisirwa, kunyora nerumwe mutauro usiri rurimi rwaamai kunotonyanya kuoma. Chinhu chakanaka ndechekuti nhasi kune akawanda software anogona kutibatsira kunatsiridza kunyora kwedu uye mune ino posvo isu tichataura nezvayo ispell, rairo rinozoshanda seChirungu cheki.
ispell inowanikwa mune akawanda maLinux ekuparadzira nekutadza. Zviri nezve izwi rekutarisa iro isu tinokwanisa kuvhura kubva kuTerminal uye kushandisa kwayo kuri nyore. Mune ino posvo isu tichataura nezvazvo uye nezve imwe sarudzo yatinogona zvakare kushandisa pasina kubatana kweinternet, asi iyi yechipiri sarudzo inozoshandisa imwe yakazara software uye, ngatiti, Linux shoma pane imwe yatinogona kuvhura kubva kuTerminal . Kana iwe uchida kuziva iyo yandinoreva, ramba uchiverenga.
1 ispell: yakanyanya linux-inoshamwaridzika yeChirungu
2 ispell inotibvumidza kutarisa mazwi nemaoko
3 Kugadzirisa zvinyorwa zvedu neLibreOffice
ispell: yakanyanya linux-inoshamwaridzika yeChirungu
Kuti tivhure ispell checker, isu tinongofanirwa kunyora iwo wekuraira uye nekuwedzera iyo nzira kune iyo zvinyorwa faira iyo yatinoda kuongorora Pane nzira mbiri dzekuzviita: yekutanga kunyora zvese neruoko, izvo zvingave zvakaita senge:
Imwe sarudzo iri nyore nyora "ispell" uye dhonza iyo faira faira kune iyo Terminal hwindo. Kana tikadhonza isu tinofanirwa kufunga kuti yega yega sisitimu yekushandisa inoibata nenzira: vamwe (seUbuntu) vanowedzera nzira mumakotesheni uye isu tinofanirwa kubvisa iwo makotesheni nemaoko. Mune mamwe masisitimu akaita seKubuntu, kana tichidhonza mukati tinofanirwa kusarudza sarudzo "Namatidza nzira pano", asi haizowedzere chero chinhu. Kana tangova nazvo, tinodzvanya Enter uye tichaona izvo zvatinazvo mumusoro wemufananidzo.
Sarudzo dziripo ndedzinotevera:
R: kutsiva Shoko. Kana izwi rakamiswa, isu tinodzvanya R kuti tiitsire neimwe yeaya anowanikwa mune runyorwa. Tichaona "promt" iyo inoti "Tsiva na", kwatinofanira kuwedzera huwandu hwesarudzo uye tinya Enter. Ichangoerekana yasvetukira kune rinotevera rakapereterwa izwi.
A: gamuchira pasi pechirongwa ichi chete.
I: anoigamuchira uye achawedzera izwi muduramazwi netsamba yekutanga mumusoro.
L- Kutsvaga kwemazwi mune dhairekitori rehurongwa.
U: inogamuchira izwi uye ndokuriwedzera pasina mavara makuru kuduramazwi.
X: nyora zvakasara zvefaira uye chengeta.
Q: inobuda ichiregeredza shanduko.
ispell inotibvumidza kutarisa mazwi nemaoko
heyi imwe sarudzo ichatishandira isu chete mazwi, iyo yatinogona kuwana nekungonyora "ispell". Kamwe Enter painodzvanywa, tichaona vhezheni yechirongwa uye nekukurumidza iyo inoti "izwi:" (izwi), panguva iyoyo isu tinofanirwa kuchipinda uye tinya Enter. Kana zviri izvo chaizvo, tichaona "Ok". Kana zvisiri, ichataura sarudzo dziripo. Mumuenzaniso uri pamusoro ndakapotsa zvisirizvo "hello" (hello) uye yakaratidza halo, yakabata, gehena, hello, helm, helot, rubatsiro, helo uye he-iye. Mune ino kesi iyo chaiyo yave yechina.
Zvekuchengetedza, ispell haiparadze mafaera atinoda kugadzirisa, kana kwete zvakananga. Hongu inovanyora, asi padyo nayo tigadzirire iyo .bak faira iyo yatinogona kuvhura kubva kune chero zvinyorwa zvemavara. Iyi mhando yekuchengetedza matanho haatombokuvadza.
Sechimwe chikamu cheruzivo, kana tichida kugadzirisa mazwi atawedzera kuduramazwi tinofanirwa kuzviita kugadzirisa iyo faira.ispell_default iyo inogadzirwa mune yedu yega dhairekitori patinongowedzera izwi kuduramazwi re ispell. Kana chatiri kuda kudzoreredza duramazwi, zvese zvatinofanirwa kuita kudzima zvakataurwa faira. Isu tinorangarira kuti iyo poindi iri pamberi zvinoreva kuti yakavanzwa nekutadza.
Kugadzirisa zvinyorwa zvedu neLibreOffice
Sarudzo yechipiri "shoma linuxra" yandaitaura nezvayo ndeyokuzviita nechero zvinyorwa zvinyorwa zvinosanganisira maduramazwi. Semuyenzaniso, LibreOffice. Kushandisa LibreOffice's Chirungu (kana chero mumwe mutauro) cheki tichaita zvinotevera:
Chero isu tichivhura LibreOffice Munyori uye kuvhura iyo faira yatinoda kugadzirisa kubva kuFaira / Vhura kana isu tinya-kurudyi pairi uye titaure kuti izarure naNyori.
Tevere isu tichaenda kune Zvishandiso / Spelling. Zvatichaona zvichafanana nezvamunoona mune iyo skrini pamusoro pemitsara iyi: chinyorwa bhokisi pamusoro nezviri mufaira, bhokisi remavara pazasi nemazano uye sarudzo kurudyi.
Nokusingaperi, LibreOffice's spell checker inogara ichitanga mumutauro wekutanga, ndiko kuti, Spanish kune vakawanda vaverengi veAddict Linux. Kana tichida kuti igadzirise muChirungu, ticharatidza menyu munzvimbo yepamusoro uye sarudza "Chirungu". Nekukanganisa, iyo Chirungu inowanikwa ndeyeiyo United States, asi isu tinogona kuwedzera zvimwe kubva kune zvakajairika masetingi eanoshanda system. Ehe, Chirungu hachizowoneka kana isu takamboibvisa kubva muchirongwa.
Kana Chirungu changosarudzwa, zvese zviri nyore kwazvo: mutsvuku tichaona iro rakapereterwa izwi. Chinhu chinokurumidza kwazvo kuwana yakanakisa sarudzo pakati pemazano uye tinya kaviri pairi. Izvo zvinongo shandura iyo voenda kune inotevera iyo isina kupereterwa. Tine sarudzo dze:
Regedza zvese (nguva dzose mune izvo zvinyorwa).
Wedzera kuduramazwi (yeiyi uye nenguva dzese dzemberi).
Correct (zvakafanana nekudzvanya kaviri).
Ruramisa zvese (gadzirisa iwo ese mazwi akafanana).
Nguva dzose gadzirisa.
Kana zvese zvinhu zvagadziriswa, tinya Vhara.
Chekupedzisira, zvaisazoita zvine musoro kugadzirisa gwaro rese zvachose, saka tinoriisa kubva kuFaira / Sevha menyu. Kutaura zvese, zvinongoitika pasina kutaura kuti isu tinokwanisa kushandisa izvo zvese zvasara sarudzo, senge "Sevha se" kana Export.
Izvo zviri pachena ndezvekuti Linux inogara ichitipa nyika yezvingangoitika. Kwete chete tinogona kushandisa zvirongwa senge muWindows, asi isu zvakare tine iyo Terminal iyo pane dzakawanda nguva inoshanda senzira pfupi yekuita izvi nemamwe akawanda mabasa. Ini ndinofarira kushandisa sarudzo senge yeChirungu cheki uye chero mumwe mutauro unowanikwa muLibreOffice, kupfuura chero chinhu nekuti ndinonzwa kusununguka zvakanyanya ne chirongwa neGUI mandiri ini ndinogona kushandisa mbeva kana touchpad. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kutsvaga wekuverenga Chirungu? ispell inowanikwa kubva kuTerminal.
Fedora 30 ikozvino inowanikwa mune yayo beta vhezheni, ine GNOME 3.32